Odaydhaqamadeed Mahad Salaad Soo doortay oo la dilay | dayniiile.com
Home WARKII Odaydhaqamadeed Mahad Salaad Soo doortay oo la dilay
Odaydhaqamadeed Mahad Salaad Soo doortay oo la dilay
Kooxo biskoolado ku hubeesan ayaa saakay xaafada Baar Ubax ee magaalada Muqdisho ku dilay Nabadoon Warsame Ismaaciil oo kamid ahaa waxgaradka Soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaan Muqdisho iyo Galgaduud.
Sida aan wararka ku helnay kooxaha hubeesan oo dhoor nin ahaa ayaa nabadoonka ku dilay meel aan ka fogeyn gurigiisa oo ay u joogsadeen xilli nabadoonka la sheegay in uu u socday goobtiisa shaqada.
Nabadoonka saakay la dilay ayaa la sheegay in uu kamid ahaa ergadii soo dooratay Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo dhawwaan loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka.
Ciidamo katirsan booliiska iyo Nabad Sugida ayaa gaaray goobta uu dilku ka dhacay ayaa halkaasi ka sameeyay howlgal, lamana oga in ciidamada ay dad usoo qabteen dilka nabadoonka loo geestay.
Magaalada Muqdisho ayaa marar badan lagu dilay odayaal iyo ergooyin wax kasoo doortay xildhibaanada golaha shacabka, Al Shabaab ayaana horey u sheegtay in ay dili doonaan cid kasta oo kamid noqota ergooyinka dooranaya xildhibaanada.
Previous articleHowlgal ka billaawday Magaalada Garoowe & faah faahin laga bixiyay
Next articleGuddoomiyaha G/Banaadir Oo Daahfuray Qaadista Imtixaanaadka Shahaadiga Ee Fasalka 8-Aad
Aadan Madoobe oo soo saaray farriin cusub oo ku socota xildhibaanada
Maxaa ka jira wararka laga faafiyay in ujeedo ku qarsoon...
War deg deg ah: Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble Cali oo goor dhawayd...
Wafdi uu hoggaaminaayo Rooble oo gaaray Imaaraadka
Soomaalida Netherlands oo dooratay Guddi cusub [SAWIRRO]